Wednesday July 11, 2018 - 10:15:39 in Wararka by Super Admin
Xiisada colaadeed ayaa wali ka jira dhulka Somaligalbeed kuwaas oo u dhaxeeya qowmiyadda Oromada iyo dadka Soomaalida ah.
Tobanaan qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen rabshado markale dib uga bilaawday deegaanka istiraatiijiga ah ee Mooyaale halkaas oo oo shan bilood ka hor ay xasuuq ka geysteen maleeshiyaadka Liyuu Booliska Itoobiya.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan 17 qof ay ku dhinteen iska hor'imaadyo xooggan oo shalay ka dhacay Mooyaale, ciidamo Itoobiyaan ah ayaa la sheegay in ay isaa baxeen saldhigyo ay ku lahaayeen deegaanka.
Dadka Oromada ayaa doonaya in ay la wareegaan gacan ku heynta deegaanka, Boqolaal qoys oo Soomaali ah ayaa isaga firxanaya guryahooda oo kuyaal Mooyaale waxayna usoo tallaabeen dhanka xuduud beenaadka ay wadaagaan Itoobiya iyo Soomaaliya.
Colaadda ka taagan Mooyaale ayaa daba socota isku dhacyo u dhaxeeyay shacabka Soomaalida iyo Oromada oo bilo ka hor kasoo bilaawday duleedka magaalada Jigjiga halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 120 qof.
illaa iyo hadda xukuumadda Itoobiya kama hadlin dagaalka dib ugasoo cusboonaaday Mooyaale, hoggaamiyaasha Soomaalida waxay ku eedeeyeen Taliska Addis Ababa in uu wax ka ogyahay barakicinta lagu hayo Soomaalida Mooyaale degta.